Rudolf Bultmann - Wikipedia
I Rudolf Karl Bultmann dia teôlôjiana loterana alemàna sy mpampianatra ny Testamenta Vaovao tao amin' ny Oniversiten' i Marburg. Izy dia iray amin' ireo olo-malaza tamin' ny fandalinana ny Baiboly tany am-piandohan' ny taonjato faha-20. I Bultmann, izay mpitsikera malaza ny teôlôjia liberaly, dia niady hevitra amin' ny fomba egzistansialista momba ny Testamenta Vaovao. Ny fomba fiasa hermeneotika momba ny Testamenta Vaovao dia nitarika azy ho mpanohana ny teôlôjia dialektika. Teraka tamin' ny 20 Aogositra 1884 tao Wiefelstede izy ary maty tamin' ny 30 Jolay 1976 tao Marburg any Alemaina. Pastora loterana ny rainy. Nisy fiantraikany tamin' ny mpianany maro teo amin' ny lafiny teôlôjia sy filôzôfia ny fiheverany nandritra ny fampianarany tao amin' io oniversite io, ka isan' izany i Gerhard Krüger.
I Bultmann dia fantatra amin' ny finoany fa ny famakafakana ara-tantara ny Testamenta Vaovao dia sady zava-poana no tsy ilaina, satria ny literatiora kristiana voalohany dia tsy naneho fahalianana firy tamin' ny toerana manokana. I Bultmann dia nilaza fa i Jesoa nisy, nitory, ka maty ny nohomboana no zava-dehibe, fa tsy ny zava-nitranga nandritra ny fiainany.
I Bultmann dia niantehitra tamin' ny Entmythologisierung, izay karazana hermeneotika manome heviny ireo singa miendrika angano na fedrà ao amin' ny Testamenta Vaovao. Nanamafy i Bultmann fa ny finoana ny kerigma, na ny fanambaràna, ao amin' ny Testamenta Vaovao ihany no ilaina amin' ny finoana kristiana, fa tsy ny zava-misy manokana momba an' i Jesoa ara-tantara.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Bultmann&oldid=1040723"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 08:36 ity pejy ity.